किन खतरा हुन्छ ३० वर्षपछि बच्चा जन्माउँदा ? – Mission
किन खतरा हुन्छ ३० वर्षपछि बच्चा जन्माउँदा ?
एजेन्सी– २५ वर्षको उमेरमा गर्भवती हुँदा सजिलो मात्र हुँदैन, आमा र शिशु दुबैका लागि सुरक्षित पनि हुन्छ । तर, आजभोली प्रायः महिला अध्ययन र करिअरको पछाडि लाग्दा ३५ वर्ष पुगेपछि मात्र बच्चा जन्माउने सोच बनाउँछन् । अर्थात् सन्तान भन्दा करिअर र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण पनि कतिपय दम्पत्तीको ढिलो सन्तान हुने गरेको हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार सन्तान जन्माउन ढिलाईको अर्थ आमा र शिशु दुबैको स्वास्थ्यमा थप समस्या र संकट ल्याउनु हो ।
विज्ञानको चमत्कार र स्वास्थ्य क्षेमा भएको प्रगतिसँगै गर्भधारण गर्न उमेरको तगारो विस्तारै हटेपनि ३५ वर्ष पुगेपछि जन्माएको सन्तानमा अपांगता लगायत विभिन्न समस्याहरु देखिन्छन् । असामान्य क्रोमोजोमका कारण ३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउदा १ हजार शिशुमा हरेक १ एउटा शिशु जन्मदै सुस्त मनस्थिति हुने गर्छन् । त्यस्तै, चालिस वर्ष सो भन्दा बढी उमेरमा सन्तान जन्माउदा १ सय जनामध्ये एक जनामा डाउन सिन्ड्रोम समस्या देखिन्छ ।
तसर्थ बच्चाहरु लुलो लंगडो, अपांग, सुस्त मनस्थित लगायतका अधिकांश समस्या पाको उमेरमा सन्तान उत्पादनको उपज हो । ३० वर्षपछि पहिलो गर्भाधारण हुँदा तुहिने वा पेटमा नै बच्चा मर्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ आफू र आफ्नो परिबारको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो करिअर र पढाई हुन सक्दैन ।
सुत्केरी हुने बेलामा पनि उमेर छिप्पिएर गर्भाधारण गरेका महिलालाई निकै कठिनाई र पिडा हुने विज्ञहरु बताउँछन् । कि त उनीहरुलाई व्यथा लामो हुन्छ वा निकै तीब्र पीडा हुन्छ । त्यस्तो बेला उनीहरुलाई सी सेक्सनको आवश्यकता पर्न सक्छ । उमेरसँगै भ्रूण राख्ने पाठेघर पनि बुढो हँुदै जान्छ र २० वर्षको उमेरमा जस्तो यसले प्रभाकारी रुपमा काम गर्दैन ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २३, २०७२ 3:57:03 PM |
Prevकिन रुन्छौँ हामी ? महिला पुरुष भन्दा धेरै किन रुन्छन् ? (अनुसन्धान)
Nextकटुवा पेस्तोल र गोली सहित पक्राउ